နောက်ဆုံးအိုအေစစ် Hacks 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
အိုအေစစ် ဒဏ္Hာရီ Hacks
Gamepron ရှိအကောင်းဆုံး Oasis Hack များအားလုံးကိုရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Oasis Aimbot၊ ESP / Wall Hack၊ NoRecoil နှင့်အခြားအရာများကိုပေးသည်။ ဒီမှာရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများဖြင့်ပိုမိုအနိုင်ရရှိပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ Oasis hacks များကိုသင်မ ၀ ယ်ပါကသင်ဝယ်ယူရန်သင်ရှာဖွေနေသည့် tool ကိုမကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်အသစ်ဖြစ်နေဆဲရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေစဉ်၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အချိန်ဖြန့်ဝေမှုနှောင့်နှေးနေသည်။ များသောအားဖြင့်လက်ငင်းဖြစ်သော်လည်းနာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။ product product ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ရွေးချယ် အိုအေစစ် hack
Oasis Hacks၊ Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More
ယ်ယူရန် အိုအေစစ် Hack in4ခြေလှမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရွေးချယ်ထားသောခေါင်းစဉ်များမှသင် hacks များကို ၀ ယ်လိုသည့်ဂိမ်းကိုရွေးပါ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော hack ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရန်ကွဲပြားသောအရာများရှိသည်
Gamepron မှကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ရရှိနိုင်သော (နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်လုံခြုံသော!) ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြု၍ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပါ။
သင်၏သော့ကိုရယူခြင်းနှင့် Oasis Hacks များကို Download လုပ်ပါ။
သင်၏ထုတ်ကုန်သော့ကို သုံး၍ ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှမ်းမိုးရန်သင်လိုအပ်သည့် hack များကိုရယူပါ။
အဘယ်ကြောင့် Gamepron Oasis Hacks ကိုသုံးပါ?
Survival ဂိမ်းများသည်သင်၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်အလိုအလျောက်စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူသည် Last Oasis နှင့်ခြားနားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hacks များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သို့အားဖြင့်နည်း။ ကစားနေစဉ်စိတ်ပူစရာခြိမ်းခြောက်မှုများစွာရှိသည်။ သင်တစ်ကိုယ်တော်၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ဦး နှင့်ဖြစ်စေပျော်ရွှင်မှုသည်နောက်မှမဟုတ်ဘဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုစောစောစီးစီးသင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ PvP (Player Versus Player) သည်ဤဂိမ်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်အားသာချက်တစ်ခုလိုချင်သည်။ သငျသညျလပေါင်းများစွာ "သူတို့ဓားကိုထက်မြက်" ခဲ့ကြသူကစားသမားကိုတွေ့သောအခါသင်၌မျှော်လင့်ချက်မရှိသကဲ့သို့ခံစားရ၏။ Last Oasis ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါမျှော်လင့်မထားသောကစားသမားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hacks များကိုသာ အသုံးပြု၍ အောင်မြင်နိုင်သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ခံစားချက်ကိုရရှိသည်။ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Oasis Hacks များကိုသင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်လုပ်ဆောင်ရန်မှာ Gamepron မှထုတ်ကုန်သော့တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အခြား hack developer များအဖို့သားကောင်ဖြစ်သွားသောရိုးရာလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသွားပါ။ သူတို့ကပဲအမြန်ဆုံးကိရိယာများကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ယူချင်တယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်မှာအမြတ်အစွန်းရလာသည် - Gamepron သည်အချိန်စမ်းသပ်မှုကိုခံရပ်နိုင်မည့်ပရီမီယံကိရိယာများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ သင်၏ငွေကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်သုံးစွဲနေသည်ကိုသင်သိလိုပါကသင်၏ hack များအားလုံးကို Gamepron ရှိဤနေရာမှ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းစေသည်။
Last Oasis အတွက်အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုသင်အရင်ကအသုံးပြုဖူးပါသလား။ အခြားဂိမ်းကစားရင်တောင်အခမဲ့ကိရိယာတွေက Gamepron မှာတွေ့ရတဲ့စွမ်းအားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hack အတွင်းထည့်သွင်းထားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများအားလုံးသည်သင်ကစားသမားတစ် ဦး အနေနှင့်မည်မျှကျွမ်းကျင်မှုရှိပါစေ၊ ပိုမိုလွယ်ကူအောင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Oasis Hacks ကိုဖွင့်ပြီးပျက်စီးမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ပြီးကလေးတစ်ယောက်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ထိုင်။ ထိုင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသောကိရိယာများသည်မည်မျှအစွမ်းထက်ကြောင်းသက်သေပြရုံမျှသာဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသောအရည်အသွေးကိုသင်နားလည်လာပါကသင်ဘာကိုစောင့်နေသနည်း။ ယနေ့ထုတ်ကုန်သော့ကို ၀ ယ်ယူပြီး ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိ Oasis Cheat များကိုသံသယကင်းစွာဖြင့်ရယူပါ။ သင်ကပထမဆုံးအကြိမ် hack ဖို့ကြိုးစားနေရင်တောင်အကူအညီလိုသူမည်သူမဆိုကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘူး၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်တိုင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မယ်။ သင်အကူအညီတောင်းဖို့အချိန်ရောက်လာပြီလို့ခံစားရတဲ့အခါ Gamepron ဟာအွန်လိုင်းနံပါတ် ၁ ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။
အိုအေစစ် Wall Hack (ESP)
Oasis Player အချက်အလက် ESP (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်၊ အကွာအဝေး)
filter များနှင့်အတူ Oasis Item ESP
အိုအေစစ်စူပါခုန် mode (activated သည့်အခါအဘယ်သူမျှမကျဆုံးပျက်စီးမှု) ။
အိုအေစစ်အရိုး & key ကို configurable ရည်ရွယ်ချက်။
အိုအေစစ် Recoil လျော်ကြေးပေး
အကောင်းဆုံး အိုအေစစ် ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ
PvP တိုက်ပွဲများအတွင်းကြီးမားသောအားသာချက်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Player ESP ကိုသုံးပါ၊ သင်အမြဲတမ်းရန်သူမော်ဒယ်များကိုအစိုင်အခဲ၊
ကစားသမားမော်ဒယ်များကိုနံရံများမှတဆင့်မြင်နိုင်ရုံသာမကအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက် (သူတို့၏အမည်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အကွာအဝေးများကဲ့သို့) ကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။
Oasis လုယက်ခြင်းကဲ့သို့သောရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းတွင်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်း ESP ကို ​​filters များဖြင့် သုံး၍ ကောင်းသောအရာများကိုရှာရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Oasis Aimbot ကိုအသုံးပြုရန်သင်ရွေးချယ်သည့်အခါသင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သေစေနိုင်လောက်ပါသည်။ သေနတ်တိုက်ပွဲများသည်အလျင်အမြန်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
Oasis ကျည်ဆံလမ်းကြောင်း (အကွာအဝေးနှင့်အလယ်အလတ်ထိရောက်မှု)
တိုတိုနှင့်အလယ်လတ်နှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်တော်ပြီးသင်ရိုက်ချက်များကိုခြေရာခံနိုင်ရန် Oasis Bullet Track အင်္ဂါရပ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အိုအေစစ်စူပါခုန် mode (မဖွင့်ပါကပျက်စီးခြင်းမရှိ)
Gamepron ကိုသုံးသောအခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှသေဆုံးခြင်းသည်အတိတ်ကာလဖြစ်သည်။ Super Jump Mode ကိုဖွင့ ်၍ လေယာဉ်မောင်းပါ၊
အိုအေစစ်အရိုး & key ကို configurable ရည်ရွယ်ချက်
Oasis Aimbot တွင်အမျိုးမျိုးသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့် Bone Prioritization နှင့်အခြားသောအရာများတပ်ဆင်ထားသည်။
Oasis မြင်နိုင်စစ်ဆေးမှုများ aimbot
ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Aimbot ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ရိုက်ချက်များသည်ပြိုင်ဘက်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်သင့်အား Visible Checks function ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင်၏ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်မကောင်းသောအကြံအစည်များကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hack တွင်ရရှိနိုင်သည့် Recoil Compensator ကိုသုံးပါ။
Planet တွင်အကောင်းဆုံးအိုအေစစ် Legends ကစားသမားဖြစ်လာသည်
၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောကြိတ်ဆုံချက်ဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ခုန်သံများကခဏခြင်းတွင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောကြောင့်မည်သည့်ကိရိယာမှမပါဘဲ Oasis သို့ချဉ်းကပ်ရန်ကွဲပြားသောကစားသမားတစ်မျိုးလိုအပ်သည်။ သငျသညျက troll ဖြစ်သို့မဟုတ်အချို့သောအလျင်အမြန်တရားမျှတမှုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းရှိမရှိကစားသမားမှတက်သည်, ဒါပေမယ့်ရုံ Gamepron သင်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ် Oasis Hacks အားလုံးရှိပါတယ်ငါသိ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oasis cheat နှင့်အတူအစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံး Oasis ကစားသမားဖြစ်လာ!
လူကြိုက်များ Oasis ဟက်ကာများနှင့် cheat
Oasis ESP နှင့် Wallhack
အခြားအိုအေစစ် Hacks နှင့် Cheat
Gamepron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုအခြားမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုဖြန့်ချိသကဲ့သို့အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သမျှအကျိုးအရှိဆုံးနှင့်ထိရောက်သော Oasis Hack များယူဆောင်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Gamepron မှကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံး Oasis Hacks နှင့် Cheats မှအကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာများကိုတီထွင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောနှင့်အတည်ပြုပြီးသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေသင်သည်ဝဗ်ပေါ်ရှိထင်ရှားသော Oasis Hacks များကိုအမြဲတမ်းရရှိလိမ့်မည်။ Gamepron ရှိ Oasis Aimbot တွင်သင်၏ပြိုင်ဘက်တစ်စုံတစ်ခုကိုအရိုး ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ် Instant Kill ကို အသုံးပြု၍ ဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သည်။
နောက်ထပ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်များမှာ Footprints နှင့် High Damage options များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်သင်၏ရန်သူများကိုလေပြင်းတိုက်ခတ်စေပြီးသေစေနိုင်သည်။ Oasis တွင်သင် ပိုမို၍ တိုးတက်ပြီးရှင်သန်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုသိသာထင်ရှားစေသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Aimbot ကိုဖွင့်ထားလျှင်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သည်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ cheats များကိုရယူခြင်းအားဖြင့် Oasis မာစတာဖြစ်လာရုံမကဘဲသင်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Aimbot ဖွင့်ထားသည့်အချိန်တွင်သေနတ်ဖြင့်ချိန်။ သေမည်မဟုတ်ပါ။ Bone Prioritization ကသင့်အားမည်သည့်နေရာတွင်ရိုက်လိုသည်ကိုထောက်ပြရန်နှင့်သင့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဂရုပြုနေသည့် Auto-Aim / Fire သည်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပြန်လည်ထိုင်။ အနားယူသည်။ Oasis Aimbot သည်သင့်အတွက်အလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်“ ပျော်စရာ” ဟုမဆိုပါကသင့်အားအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရန်ပြောင်းလဲနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Aimbot ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ပစ်မှတ်ထားသူတိုင်းကိုသတ်ပစ်နိုင်သည့် Instant Kill အင်္ဂါရပ်ကိုလည်းအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ခုခံကာကွယ်ဖို့အခွင့်အရေးတောင်သူတို့ကိုသင်တောင်မပေးနိူင်ဘူး၊ အဲဒါကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့အနိုင်ရနိုင်မှုကအများကြီးပိုမြင့်တယ်ဆိုတာပဲ
ဒီနေရာမှာ Gamepron မှာရှိတဲ့အရည်အသွေးမြင့် Oasis ESP နဲ့ Wall Hack ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်၊ ဒါကရှင်သန်နိုင်တဲ့ဂိမ်းထဲမှာဒီအားသာချက်အတွက်အကောင်းဆုံးအားသာချက်ရှိဖို့လိုလို့ပဲ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့်သင်ပုန်းအောင်းနေသည့်နေရာကိုရှာဖွေရန် Oasis ESP နှင့် Wall Hack ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင်သူတို့လုပ်နိုင်သမျှကိုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးဝင်သော Oasis ESP ဖြင့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပါ။ ကစားသမားအရိုးစုများကိုနံရံများမှတဆင့်မြင်နိုင်သည်၊ သို့သော် ESP (Extra Sensory Perception) ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကစားသမားတစ် ဦး ၏အမည်အပြင်သူတို့မည်မျှကျန်းမာရေးချန်ထားခဲ့ရကြောင်းနှင့်သူတို့၏အကွာအဝေးကိုပင်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Item ESP ကို ​​filter များဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ tool များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအရာများသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသင်သိနိုင်သည့်အတွက်အလျင်အမြန်လုယူနိုင်သည်။ Oasis ESP သည်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ညွှန်ပြနေသောကြောင့်အသုံးမကျသောအမှိုက်များကိုကောက်ယူရန်အချိန်ပိုပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
Oasis Hacks အများစုမကျင့်သုံးသောနောက်ထပ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်မှာ Footprints ဖြစ်သည်။ သင်၏အနီးရှိရန်သူများကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အရိပ်အောက်ခြေမှအင်္ဂါရပ်ကို သုံး၍ သင့်အရိပ်တွင်ပုန်းခို။ အချိန်တန်လျှင်ရိုက်နှက်နိုင်သည်။ သင်ခြေရာခံရန်ရန်သူဆီသို့လမ်းပြနေသည့်အခါချုံချို့ယွင်းရန်စီစဉ်ခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောထောင်ချောက်များတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏အကွာအဝေးအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုထားပါကအထူးသဖြင့်မှန်ကန်လိမ့်မည်။ သင်ဟာပြိုင်ဘက်တွေကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ရုံသာမကဘဲ၊ သူတို့ဟာထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာကိုသင်သိပါလိမ့်မယ်။ နာမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ High Damage အင်္ဂါရပ်သည်သေနတ်သံကြားသည့်အခါရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ရိုက်ကူးသည့်တစ်ခုတည်းသောပစ်ခတ်မှုသည်မည်သည့်လက်နက်ကိုအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက် ပို၍ အင်အားကြီးမားမားဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Footprint, High Damage နှင့် Distance features များကို enable လုပ်ခြင်းဖြင့် bonafide လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္playကိုသင်ဖွင့်နိုင်သည် - ထို့ကြောင့်သင်ဘာကိုစောင့်နေသနည်း။
သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကစားသမားဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hacks နှင့် Cheats နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားအချက်များလည်းရှိသည်။ အခြားလူများကသူတို့ကိုယ်သူတို့ cheat ကိုအသုံးပြုရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်ကသူတို့ကိုလက်အောက်ခံရန်ခိုင်းစေနိုင်သည်! ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်အထိပြောဆိုခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးနှင့်အတူ 2D Radar နှင့် Warnings လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသေးသည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားကူညီမည့် Super Jump Mode ကိုလည်းရရှိထားပါသည်။ ကျဆုံးပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အရည်အသွေးနိမ့်သော hack ကြောင့်သင့်တိုးတက်မှုများအားလုံးမဆုံးရှုံးစေလိုပါ။ ၎င်းသည် Antamatal ကာကွယ်မှုကိုမပေးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Gamepron တွင်တွေ့နိုင်သောအခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် ၁၀၀% မတွေ့ရသေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အကောင့်များပိတ်ပင်ခံရမည်ကိုသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ဟက်ကာများသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်များကိုရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
အိုအေစစ် Hacks မေးခွန်းလွှာ
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oasis Hacks
Gamepron မှ Oasis Hacks များကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြန့်ချိမှုတိုင်း၏အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်နေသည့်အတွက်သင့်အား lackluster tool တစ်ခုသာပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်မည်မျှအရည်အချင်းရှိပါစေဂိမ်းများကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန်ကူညီပေးမည့်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်သည့် hack များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hacks ကိုယုံကြည်သင့်သည်။ ၎င်းသည်သီးသန့်ရရှိနိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oasis Aimbot
Oasis သည်ကစားသူအများစုအတွက်အသုံးပြုသူ၏ဆုလာဘ်ကိုသင့်အားတိကျမှန်ကန်စေသည့်ပဟေofိတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Aimbot ကိုဖွင့်ထားပါကနောက်ထပ်ရိုက်ချက်တစ်ခုလွတ်သွားမည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဂိမ်းကစားနေစဉ် (၎င်းသည်မထင်ရှားသည့်အလားကဲ့သို့) အောင်မြင်မှုများစွာသို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ သေနတ်ဒဏ်သည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုသင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oasis ESP
Oasis သည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပြီးသင်တစ်ချိန်ချိန်လုယက်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာရှောင်ကြဉ်ရန်စဉ်းစားရမည့်“ junk” ပစ္စည်းများများစွာရှိသည်။ သင်ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောလုယက်မှုများကိုသာအာရုံစိုက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Item ESP ကိုစစ်ထုတ်စက်များဖြင့်အဆောက်အ ဦး များသို့ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oasis Wallhack
Oasis Hack များသည်အရည်အသွေးကွဲပြားသော်လည်း Gamepron နှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Wall Hack သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis ကိရိယာများအားလုံးတွင်တွေ့ရသောအရည်အသွေးနှင့်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများကိုအလျင်အမြန်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အဲဒါကိုအခွင့်အလမ်းအဖြစ်မစွန့်ခွာဘဲအခြားဖက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ဖို့ Oasis Wall Hack ကိုသုံးပါ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oasis Norecoil
ကျည်ဆံတိုင်းသည် Oasis ကဲ့သို့သောဂိမ်းတွင်ရေတွက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis NoRecoil Hack ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အတွက်အံ့ဖွယ်ရာများကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဒီကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကရန်သူတွေကသူတို့ကသင်နဲ့အတူသွားနေရင်အခွင့်အရေးမပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ လူတွေကိုမင်းရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင် Oasis NoRecoil အင်္ဂါရပ်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
အကောင်းဆုံး Oasis hacks များကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
အကောင်းဆုံး Oasis Hack များအားလုံးကို Gamepron ၌ဤနေရာတွင် download ရယူနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုပေးပြီးသည်နှင့်၎င်းသည် (သင်ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်သော့ပေါ် မူတည်၍) ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hacks များကိုရယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Gamepron ကို အသုံးပြု၍ Oasis Aimbot, ESP, Wall Hack နှင့် NoRecoil ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံး hack များအားလုံးကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
သင်၏ Oasis ဟက်ကာများသည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း
Gamepron နှင့်သင် hack ရန်ရွေးချယ်သည့်အခါကောင်းကင်သည်အကန့်အသတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Oasis Hacks သည်လိုက်ဖက်။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်ပြီးအသုံးပြုနေစဉ် ၁၀၀% မတွေ့ရှိရသေးသောကြောင့်သင်၏အကောင့်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုံခြုံသည်။ cheat တစ်ခုစီအတွက်တင်းကျပ်သော slot အရေအတွက်များရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည်။
Gamepron ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ဝါးနိုင်သည်ထက်ပိုရန်မလိုပါ၊ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသော့များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ဘက်စုံသုံးမှုသည်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Oasis Hack လိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက်သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လာရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ သင်၏ product key သည်တက်ကြွနေစဉ်အတွင်းသင် hack ကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကြိုက်သလောက် hack လုပ်နိုင်သည်။
Awesome ကို အိုအေစစ် ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ